Hafatry ny MF 06/SLXVIII – FJKM
Hafatry ny MF 06/SLXVIII
(24 Aprily -01 Mey 2019)
Ny Mpiandraikitra Foibe nivory ara-potoana teto Antananarivo (CFD Ampandrana) tamin`ny 24 Aprily -01 Mey 2019, mamangy ny fianakaviana Kristiana rehetra manerana ny sahan`ny FJKM “ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo”I Kor.1/3’. Miarahaba antsika rehetra nahatratra ny Paska.
Misaotra ny Tompo Jesoa, Lohan`ny Fiangonana, fa tanteraka soa amantsara ny fanokafana ny fankalazana an`Andriamanitra noho ny fahatraran`ny Sekoly Protestanta FJKM ny faha 200 taona nisiany. Ho redonina eo am-panombohana amin’ny fanompoam-pivavahana rehetra ataontsika ny hira fanevan’ity jobily ity mandritra izao taona 2019 izao, toy ny natao tamin`ny faha 200 taona nidiran`ny Misiona LMS sy ny faha 50 taonan`ny FJKM.
Ny hatao tsangambaton’io Jobily io dia ny fananganana ivon- toerana ho an’ny fanomanana Mpampianatra any Imerimandroso Ambatondrazaka.Entanina isika mba hifarimbona amin’izany
Ampahatsiahivana eto indray fa ny faha 25 taona hatrany no atao hoe JOBILY ary misy fotoam-panokafana sy ivony, ary famaranana.
Ny FANKALAZANA tsingerintaona kosa dia ivelan`izany ary indray maka ihany no anaovana izany: isaky ny 10 taona raha olona, ary azo atao isaky ny 5 taona raha sampana na fikambanana.
Misaotra ny Tompo Jesoa fa nosokafana tao anatin’izao fivorian’ny MF06 ny “Sekoly Doktoraly” (Ecole doctorale) izay ao amin`ny Oniversity Ravelojaona.
Isaorana sy ankasitrahana eto ireo Tale sy Mpampianatra rehetra ao amin`ny Sekoly FJKM fa tena tsara dia tsara indrindra sy miavaka ny vokatr’ireo fanadinana nahazoana diplaoma ara-panjakana tany amin’ny isan’ambaratonga tamin`iny taom-pianarana lasa iny.
Nekena tamin’izao fivoriana izao ny hitambaran’ireo FJKM any Canada amin’ny Synodamparitany 37 Vatofehizoro Ampitandranomasina
Momba ny “Facebook” sy ny “Site Web”: Efa manana ny “Kaonty” azy manokana ny FJKM, ka aoka hanontany sy hila hevitra hatrany any amin`ny Tomponandraikitry ny serasera sy ny fifandraisana (AFIFAB) ao amin`ny Foibe FJKM izay manana hetaheta hampiasa izany.
Averina amintsika vahoakan`Andriamanitra eto amin`ny sahan’ny FJKM eto hatrany, fa isika Fiangonana FJKM dia tsy manaiky ny fifanambadian`ny lahy samy lahy, na vavy samy vavy, ary araka ny voalazan’ny Soratra Masina Lev.18/22;Lev20/13/;Rom.1/27;I Kor.6/9, 10; ITim.1/10, 11) sy araka ny Foto-dalàna sy Fitsipika andininy faha 74.
Aoka samy hahatsiaro amim-bavaka ny fanatanterahana ireo Zaikabe sy Fihaonambe ary Fiofanana any amin`ny isan-tokony avy amin’ity taona ity, ary toy izany koa ny SYNODA LEHIBE SLVIX izay hatao any Sambava SP16, KRIFAA ny 12-19 Aogositra 2020.
“Ary Andriamanitry ny fiadanana, Izay nitondra an`I Jesoa Tompontsika, Mpiandry ondry lehibe, hiala amin`ny maty, mitondra ny ràn`ny fanekena mandrakizay, Izy anie hahatanteraka anareo amin`ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin`ny alalan`I Jesoa Kristy; ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay Amena.”(Hebreo 13/20, 21).
Ny Filohan`ny F.J.K.M
Hafatra KRISMASY 2019